Alohan'ny handehananao any Scandinavia: toro-hevitra fototra
Raha mieritreritra fitsangatsanganana any Scandinavia ianao ary manana fanontaniana fototra, dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Ity ny famintinana ireo fanontaniana izay matetika tonga rehefa mandamina fitsangatsanganana any amin'ny iray amin'ireo firenena Scandinavian, Danemark , Soeda , Norvezy , na Islandy . ( Inona moa i Scandinavia? )
Ny fotoana tsara indrindra amin'ny taona hitsidihana an'i Scandinavia
Scandinavia Month By Month dia loharano lehibe ho an'ity fanapahan-kevitra ity amin'ny toro-hevitra amin'ny hetsika, toetr'andro, ary toro-hevitra.
Ny fotoana mampanembona dia ny Mey ka hatramin'ny Septambra. Ny tanàna Scandinavian dia manolotra fety sy zava-mitranga tsy misy fijery any amin'ny volana mafana. Amin'ny volana ririnina, ny andro dia mihenina fa ny fanatanjahantena amin'ny ririnina toy ny skiing dia feno (jereo ny toetr'andro sy ny toetrandro any Skandinavia ). Ny fitetezana ihany koa dia ho mora kokoa mandritra izany fotoana izany.
Tsy mila mendrika ny Scandinavia
Mazava ho azy fa miankina amin'ny fomba fiainanao mandritra ny fitsidihanao ny habetsaky ny dia haleha. Marina fa manana fari-piainana avo lenta ny Scandinavians ary hita taratra amin'ny vidiny maro izany. Zava-dehibe ny hiomananao amin'ny mpitari-dalana (an-tserasera na an-tsoratra): hahita torohevitra mahasoa maro ianao momba ny làlana tokony handehanana sy ny tokony hatao mba hahalalanao kokoa ny volanao. Ny toro-hevitra momba ny fialan-tsasatra sy ny fampahalalana mahasoa dia hita any amin'ny sokajy tsirairay any amin'ny ankavia.
Momba ny Masoandro Midnight, Aurora Borealis, ary ny Polar alina
Ny toerana manan-danja indrindra hijerena ny Masoandro Midnight dia any amin'ny faritra avaratra atsinanan'i Norvezy, ary indrindra indrindra any Nordkapp, eo anelanelan'ny volana mey sy faran'ny Jolay.
Ny Masoandro Midnight dia any amin'ny faritra avaratry ny Artic Circle. Ny Aurora Borealis (jiro afovoany) dia tsara indrindra hita ao amin'ny Artic Circle amin'ny alina mafana sy maizina. Hita any amin'ny faritra atsimon'i Scandinavia izy ireo indraindray, nefa tena zava-dehibe ny ao anaty alina maizina sy mazava, lavitra ny tanàna.
Ireo mpandeha dia afaka mahatsapa ny alina alina Polar .
Na ilaina ny Visa
Miankina amin'ny firenena niaviany izany. Afaka miditra malalaka ny Scandinavia ny olom-pirenena Eoropeana raha tsy misy visa. Ireo olom-pirenen'i Etazonia, Kanada, ny ankamaroan'i Amerika Atsimo sy Aostralia ary Nouvelle Zélande dia matetika tsy mandefa visa ho an'ny latsaky ny telo volana ary tsy manana zo hiasa. Manaova fanaraha-maso indroa eo am-panaovana ny dianao.
Fahasalamana mety hitranga any Scandinavia
Tsy misy fahasahiranana ara-pahasalamana (raha toa ianao ka milomano mafana mba hijanona ho mafana!) Maka fikarakarana amin'ny ririnina satria afaka mangatsiaka be. Ny làlam-pamokarana sy ny lozam-pifamoivoizana avy amin'ireo mpitaingin-tsoavaly dia mety ho loza goavana any Scandinavia.
Miankavia tsy miteny Tenin'ny Scandinavian
Eny, azo atao izany! Ny ankamaroan'ny Scandinavians dia miteny fiteny maro ary ny teny anglisy dia tsara lavitra any Eoropa avaratra. Alemà dia malaza koa. Hanampy izany raha mitondra rakibolana miaraka aminao ianao. Na, azonao atao fotsiny ny miantso ireo teny grika na fiteny sasantsasany mba hanomana kely.
Eurail Pass from Eurail: Iza moa no tsara indrindra?
Soso-kevitra amin'ny tavoahangin-glaserina ao anaty valizy
Trano fandriana sy fialofana tany Eorôpa
Scandinavia Fast facts
Electrical Outlets any Skandinavia
Ny tsara indrindra any Japon
72 ora any amin'ny Nosy San Juan
Review of Restaurant El Jibarito ao San Juan
Firy ny rano tokony hosotroiko?
Fivarotana asa sy asa aman-draharaha momba ny asa 2017 tany Washington DC
Houston Calendar of Events Aogositra
Zavatra hatao any Orlando amin'ny Septambra
Seven's Top 10 Dine bars
Kalandary ofisialin'ny Phoenix ho an'ny Febroary 2018
Chicago Gay Clubs sy ny trano fandroana
10 Statistiques maivana momba ny sakafo maraina miaraka amin'ny mpanjakavavy
Vonjeo ny vola miaraka amin'i Toronto CityPass
Gay sy Lesbian Friendly Destinations any Karaiba
The Museum of History of the State of Texas